”ကျမတို.ဟာ အနိုင်ယူချင်ရင် အနိုင်ယနိုင်တဲ့စိတ်ကို မွေးရပါမယ်” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
တပ်မတော်သည်သာအမိ၊ တပ်မတော်သည်သာ အဖ၊ တပ်မတော်သည်သာ ကိုးကွယ်ရာ...တပ်မတော်သည်သာ...
ခေါင်းမာပြီး ဇွတ်တရွတ်နိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတယောက် တခါတလေတော့လည်း သိပ်စွာပြီး တခါတလေတော့လည်း ငအတယောက်လို ငြိမ်နေတတ်တယ် တခါတလေတော့လည်း ခံမပြော နားမထောင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတတ်တယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ နှလုံးသားမှာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုတဲ့စိတ်ရှိရှာတယ် htwelay05@gmail.com
နှစ်ပေါင်းများစွာရက်စက်စွာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ငါတို့ မြန်မာပြည်အတွက် သေချာစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပြီ ဖွဲ့စည်းပုံကဘာမှန်းမသိပါပဲ ငါတို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ မြန်မာပြည်အရးဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ အရေးပဲဖြစ်တယ်။
အဖိနှိပ်ခံပြည်သူတရပ်လုံး မလွတ်မြောက်ပဲ အမျိုးသမီးဆိုတာကွက်ပြီး မလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဆိုဘာလို. အမျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးလို. ကြွေးကြော်သံတင်ရသလဲလို. မေးလာရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပိုပြီးအဖိနှိပ်ခံနေရလို.ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေထားတဲ့ “ငရဲနှစ်ခုကြားပိတ်မိနေခြင်း” ဆိုတဲ့မြန်မာ့အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများရောက် ပြောင်းရွေ့အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစားအား လိုချင်ဖတ်ချင်ပါက အခမဲ့တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
အပြုံးလေးတပွင့် ခေါင်းလေးတချက် အညိတ်မှာ သူချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် သူဘ၀ အမှောင်ကမ္ဘာတခုက ရက်စက်စွာ ဖုံးကွယ်သွားခဲ့တယ်
Nay Bone Latt
မျက်မှန် ထူထူအောက်က မျက်ဝန်းနက်တစုံနဲ့ ကောင်လေးတယောက် သူရှာဖွေခဲ့သော စာသားတချို့ သူဖန်တီးခဲ့သော အနုပညာများ သူပြောခဲ့သော ရင်တွင်းစကား သူပေးဝေငှခဲ့ သူပြည်သူတွေ များစွာအတွက် တကယ်ဆို သူ့ အတွက်ကရော
FREE ZAY YAR THAW NOW!!!
သူဖန်တီးနေတဲ့ HIP POP သူသိပ်ချစ် မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာ သိပ်တွယ်တာတဲ့ သံစဉ်စာသား သူချစ်တဲ့ပရိတ်သတ် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်အသက်သွင်း နိုင်ပါစေ
Lu Htu Daw Ahmar
လောကမှာ အဓိပါယ်ရှိတဲ့ လူတွေ အသုံးအရမ်းဝင်တဲ့ လူတွေ လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ လူတွေ အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဆုံးသော အမေက အခုအားလုံးကို ကျောခိုင်းလို့
နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ပြစ်မှုတခု ကျူးလွန်ခြင်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးထားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံးကို အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးပါ
Some Blogs Link
သူငယ်ချင်းတယောက် Forward လုပ်ပေးထားတဲ့ မေးလ်ထဲက ပုံလေးတွေပါ၊ ဘယ်နိုင်ငံက ပုံတွေလည်းဆိုတာမသိပေမယ့် မမြင်ရသေးတဲ့ မကြည့်ဖူးသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ပြန်တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
ဟောတော့ …. ဒီလိုမျိုး အချစ်စမ်းလို့ ကတော့ တသက်လုံးမခေါ်တော့ဘူးမှတ် ..၊
ဘယ်ကတည်းက မကျေမနပ်ဖြစ်နေပါလိမ့်။ စဉ်းစားစရာပဲနော့်၊
ဒီလိုကစားနည်းမျိုး ငယ်ငယ်က ကစားဖူးသလိုပါပဲ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးမှ …
အမ်… အထဲမှာ ဘာရှိနေမလဲဆိုတာ သိချင်လွန်းလို့ ထင်တယ်။
ဒီလိုမျိုးစီးတော့ မြင်းခြေထောက်နာ သက်သာတာပေါ့နော်
ဒီလိုခြေလှမ်းမျိုးနဲ့ သာ ဆက်လက်လှုပ်ရှားလို့ ကတော့ အဟီး….
ရေမကူးတတ်ဘူးဆိုမှ ရေကန်ထဲတွန်းချတဲ့အဖြစ် သြော်တယ်လည်း ပြောရခက်သကိုး
Posted byုကယ်စင်လေး at 4:36 PM
Labels: Special Page
ဟန်ဆောင်မူတွေမလိုချင်ပါဘူး ပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့တာကနှလုံးသားအစစ် ခံစားချက်များပေါက်ကွဲချိန်ဆို သံစဉ်တွေချရေးခဲ့ရ ဒီဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးပေါ်မှာ တယောက်ထဲလွမ်းခဲ့ရအချိန်တွေကို ရင်မှာမျိုသိပ်ထားခဲ့ရခံစားချက်တွေ စာမျက်နှာလေးတခုပေါ်ပဲ သိမ်းထားချင်ခဲ့မိတာ ခွဲသွားတော့လဲမင်းအတွက် ရင်ခုံသံတွေအားတင်းရင်းနဲ့ အဝေးကမင်းကိုပဲ ချစ်နေမယ်
Forward mail တခုဆီကနေ ရထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။ ဘယ်နိုင...
Feeling 20 (1)
Kyal Sin Lay (2)
Special Page (4)
Words From Hearts (1)
”ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့တို့ ကာကွယ်မလေး .. ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တိုပိုင်တဲ့မြေ ” အခုအချိန်မှာ တို့တိုင်းပြည်ကိုစစ်ဘီလူးတွေရဲ့ လက်အောက်က ကယ်တင်ဖိုအချိန်ရောက်ပြီ
BURMA VS CHINA